Indodakazi yami ifike ekhaya izolo ebusuku inomkhuhlane esiwunakekele amahora angama-24 edlule. Kube ubusuku nemini yenkonzo kaBaba nobhuti! Ubaba ugijimela ekhemisi ukuthola izinto eziningi, umfowethu uhlanza ukungcola lapho udade engakwazanga ukugijimela endlini yangasese ngesikhathi. Izinga lokushisa kwakhe lakhuphuka ngokwanele ukuthi ngashayela uDokotela, owangitshela ukuthi angikulinde. Ngangazi ukuthi sisenkingeni, noma kunjalo, lapho ngingena egumbini lakhe futhi wayegxuma ehla phezulu kumatilasi, emangele impela. Simthulisile samphinda walala. Yisho umkhuleko - kubukeka sengathi ubusuku obude futhi.
Ngemuva kwalokho, ukukwenza kube phezulu, ngibe nezingcingo ezingami ezivela kubantu abadinga usizo namuhla. Angikwazi ukusiza noma ngubani ngenxa yokuthi i-DSL yami iphansi. Ngakho ngibalekele imizuzu embalwa kusihlwa, ngishiya indodana yami iphethe nendodakazi yami ilele, ukukwazisa nonke ukuthi ngikhonza ngokusemandleni ami futhi nginethemba lokuthi ngizobuya online, ngokomzimba nangokobuchwepheshe, ezinsukwini ezimbalwa.